DAGAALKII Carabta Oo Ka Bilaabmaya Gudaha Ingiriiska, Prince Mohammed Oo Go’aan Kama Dambaysa Ah Ku Gaadhay Iibka Manchester United Iyo Man City Oo Dagaal Dhex Mari Doono – Latest Sports News
DAGAALKII Carabta Oo Ka Bilaabmaya Gudaha Ingiriiska, Prince Mohammed Oo Go’aan Kama Dambaysa Ah Ku Gaadhay Iibka Manchester United Iyo Man City Oo Dagaal Dhex Mari Doono
Amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sucuudiga, Prince Mohammed Bin Salman ayaa ugu dambayn go’aan ku gaadhay inuu iibsado kooxda kubadda cagta waddanka Ingiriiska ee Manchester United, taas oo uu dul-dhigayo qiime lacageed oo qancin doona mulkiileyaasheeda qoyska reer Glazer.
Mohammed bin Salman oo qoyskiisu leeyahay hanti lagu qiyaasay £850 bilyan, ayaa kusoo laabtay damaca iibsiga Manchester United oo horraantii sannadkan laysla dhex maray inay kulmeen qoyska iska leh ee reer Glazer, laakiin waqti dambe ayaa afhayeen u hadlay uu beeniyey warkan.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mirror ee kasoo baxa UK, Amiir Mohammed Bin Salman ayaa go’aan rasmi ah ku gaadhay inuu soo galo saaxadda ciyaaraha oo uu kula loollamo qoyska boqortooyada Qatar ee iska leh PSG iyo Maamuleyaasha Abu-dhabi ee iska leh Man City.
Warku wuxuu sheegay in Mohammed Bin Salman uu ku doonayo in Manchester United uu ku iibsado lacag dhan £3.8 bilyan, taas oo ah qiimaha ugu sarreeya ee hadda koox lagu iibsan karo.
Warku waxa uu intaa ku daray in Boqortooyada Sucuudiga ay u sahlan tahay inay waqtigan iibsadaan Manchester United maadaama uu khilaaf soo kala dhex galay qoyska reer Glazer gaar ahaan Avram iyo Joel, kuwaas oo isku-dhacoodu sababayo inay faraha ka qaadaan kooxda ugu caansan waddanka Ingiriiska.
Dhinaca kaale, waxa jira warar soo baxaya oo tibaaxaya in Avram iyo Joel aanay doonaynin inay lacag kale iska geliyaan kooxda oo u baahan dibu-dhis si ay ugu soo laabato horyaalnimada oo ay ugu dambaysay waqtigii Sir Alex Ferguson.